£ 250 ပွဲစဉ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွအေန |
£ 250 ပွဲစဉ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွအေန
ဒီမြှင့်တင်ရေး 28 နှင့် 30 ရက်မေလအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 2016(ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, ကစားသမားတွေငွေသွင်းခြင်းနှင့်အာမခံ£ 10 နိမ့်ဆုံးနှင့်အဆို slot ကဂိမ်းပေါ်မှာကစားရမယ်.
တစ်ဆုကြေးငွေ 100% £ 250 ၏အမြင့်ဆုံးရန်သင့် 1st သိုက်တက်၏ကစားသမားရဲ့အကောင့်ကဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်.
အပိုဆုခရက်ဒစ်အတွင်းသင့်အကောင့်ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်3ထိုမြှင့်တင်ရေး၏အဆုံး၏အလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး.
ဆုကြေးငွေပမာဏကိုဆုကြေးငွေသို့မဟုတ်မည်သည့်သက်ဆိုင်ရာအနိုင်ရရှိရှေ့တော်၌လျှောက်ထား 30x ၏စံအာမခံလိုအပ်ချက်များကိုထုတ်ယူနိုင်ပါသည်. အပိုဆုကြေးငွေပယ်အနိုင်ရရှိဆုကြေးငွေပမာဏကို 4x မှာမိနစ်မှာနေကြတယ်.
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 50% MATCH အပိုဆု